Akuko - Kedu ulo oru ndi eji eme ihe eji eme ihe, ma gini bu ihe achọrọ?
Kedu ụlọ ọrụ ndị eji akụrụngwa akụrụngwa eji eme ihe, na gịnị bụ ihe achọrọ?
Nchịkọta mpempe akwụkwọ nke akụrụngwa akụrụngwa na-ezo aka na nhazi ọzọ nke nnukwu mbadamba ndị agha, ọ nwere ike rụọ ezigbo ọrụ na usoro a. Ebe ọ bụ na akụkụ ya esichara nwere ahụmịhe, yabụ na mpaghara ahụ niile, ọ dọtakwara uche ndị mmadụ, yabụ na nhazi nke nhazi, anyị kwesịrị ịghọta ọnọdụ ndị a tupu oge ọrụ nke eji eme ihe.
Industrylọ ọrụ nkwukọrịta
Ọganihu na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ eletrọnịkị nkwukọrịta na afọ ndị na-adịbeghị anya ga-achọkwu nhazi nhazi chọrọ n'akụkụ niile, n'otu oge ahụ ọ ga-adị oke oke, n'ihi na ngwaahịa ndị dị na nhazi nwere ike izute ihe ndị dị elu. Mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ Na-echekwa mmetụta dị ukwuu karị, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a ma ama na ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ nwere ike ịchọrọ maka akụkụ ndị a, ya mere akụkụ ọrụ ntanetị ga-adị mkpa karị.
Mmepe nke ụlọ ọrụ mbuli elu
Mgbe ị na-eji nhazi mpempe akwụkwọ nke akụrụngwa akụrụngwa, ị ga-ahụkwa na ọtụtụ akụkụ na ụlọ ọrụ mbuli dịkwa oke oke. N'oge usoro ntinye akwụkwọ ahụ, enwere ọtụtụ ụdị nke akụkụ ọ bụla, ndị ọ bụla na-arụ ọrụ ọ bụla ga-enwe ọtụtụ ndị na-eweta ọrụ na-arụ ọrụ na nkesa maka ha, yabụ anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ọnọdụ ndị a akọwapụtara n'oge, wee nwee ike ịmata ụfọdụ mgbanwe ụfọdụ na mkpokọta ụlọ ọrụ. Ihe ndị a ga-abara anyị niile uru. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe dị iche iche, yabụ a ghaghị ime nhọrọ ziri ezi.